LABA MIYAY ISKU HELAYSAA ITOOBIYA ? - Awdinle Online
LABA MIYAY ISKU HELAYSAA ITOOBIYA ?
Biyo xireenka Dib-u-curashada Itoobiyada Weyn (GERD) wuxuu soo nooleeyay muran ku saabsan qaybsashada biyaha webiga Niil. Soomaaliya, oo ah dal deris la ah Itoobiya kana tirsan Jaamacadda Carabta, waxay qaadatay mowqif dhexdhexaad ah. Waxay soo jeedisay in Masar iyo Itoobiya ay miiska ku furdaamiyaan ismaandhaafka ku saabsan sida loo qaybsanayo biyaha Niil.
Previous articleDhismaha Garoonka Ciyaaraha Muqdisho miyuu dhamaaday mise waxbaa dhiman?
Next articlekhasaaro ka dhashay dagaal ka dhacay Deynuunaay